'Gehenna: Ebe Ọnwụ Nwere Ndụ' - Indie Horror Movie is a Practical Effects Masterpiece - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Gehenna: Ebe Ọnwụ bi' - Indie Horror Movie is a Practical Effects Masterpiece
'Gehenna: Ebe Ọnwụ bi' - Indie Horror Movie is a Practical Effects Masterpiece
by admin March 26, 2015 633 echiche
Got ga-ahụ nke a! Ka m na-egbu oge na-eme akwụkwọ mpịakọta m kwa izu nke Kickstarter (KS) anya m kwụsịrị ozugbo na ọrụ akpọrọ GEHENNA: Ebe Ọnwụ bi. Ma eleghị anya, ọ bụ onyinyo jọgburu onwe ya nke ihe e kere eke na-adịghị mma, ma ọ bụ okwu e ji mee ihe n'okwu mmeghe nke jidere mmasị m, ejighị m n'aka. Ihe doro m anya site na njem, bụ na nke a abụghị ọrụ KS gị.
N'ebe a na ọfịs iHorror.com, ndị otu ahụ ga-atụle ọrụ ọhụụ ndị mmadụ ọhụrụ kwụrụ ogologo oge kwa ụbọchị. Karịsịa n'ihi eziokwu ahụ bụ na ụjọ bụ ụdị ama ama na mpaghara ndị a ma emesịa ha nyere anyị ihe nkiri dị ka Ndị Babadook. O di nwute, enwere otutu duds na obodo ndi a na-adighi amuta. Ma ekwere m GEHENNA: Ebe Ọnwụ bi ga-eme akara ya na ụwa ụjọ. Ndị isi ụlọ ọrụ ndị isi na-echegbula onwe ha gbasara obere nwoke kwesịrị ị paya ntị na igwe ndị na-eme ihe nkiri.
Brabụrụ dị n'azụ ya niile bụ Hiroshi Katagiri (onyinyo dị n'elu) ọ bụkwa akụkọ na-emetụta ụwa; na ijikọta ịkpụzi, etemeete, na kpochapụwo na ihuenyo mmetụta iji nweta a "realer karịa ezigbo" N'ihi. Katagiri, na-arụ ọrụ dị ka ndị pụrụ iche utịp Ihọd na fim dị ka Agụụ na Games na Lọ dị n'ọhịa (lee foto dị n’elu), ma jiri ikpere na-ehicha aka dị ka Steven Spielberg, o doro anya na ọ bụ oge ya iji banye n'oche ma gosi ndị ọgbọ ya otu esi eme ya. Lelee nke ya IMDb Ebe a.
N'ịgụ n'ihu n'ime ihe oru ngo ahụ na KS, enwere m obi ụtọ na obere obere mkpuru. O doro anya GEHENNA: Ebe Ọnwụ bi bụ ihe nkiri jọgburu onwe ya na mmetụta dị oke mkpa - nke pụtara ụdị okike ụfọdụ, na onye ka mma igosipụta njirimara nke okike dị otú ahụ? Ọ dịghị onye ọzọ Doug Jones! Abụ m ezigbo onye ọrụ Doug na ọ bụrụ na ị maghị onye m na-ekwu maka ya, ihere na-eme gị, dịka ị kwenyesiri ike na hel ga-ahụworị ihe okike ọ gụrụ. Ọ banyere 'Slọ nyocha nke Pan, Hellboy, Fantastic Four, Menmụ nwoke na Nwa 2, na ndepụta na-aga n'ihu.
(Ihe osise dị n'elu bụ Mike Elizalde, onye nwe Spectral Motion, na-arụ ọrụ na Jones dị ka Nwoke Ochie ahụ, ka Hiroshi na-ele anya. Mike na Spectral Motion na-abanye na fim ahụ.)
N'ikpeazụ, nkata maka ihe nkiri a na-ada ụda, ọ bụghị ntụgharị na ihe anyị hụburu. Ọ bụrụ n’ịle anya akwụkwọ akụkọ Hiroshi, ọ na-ejide ihe na-eme ezigbo ihe nkiri na otu ihe dị mkpa mere ya ji atụ ụjọ. Ma o doro anya na ị B NOTGH need mkpa oke iwe na omume rụrụ arụ iji mee ka ndị mmadụ maa jijiji, kama, ị na-emikpu ndị na-ege gị ntị na akụkọ ahụ na iji usoro ọdịnala eme ihe; ndị ụjọ ga-abịa site n'ikike ya iweta ihe ndị o kere eke na ndụ yana mmetụta bara uru, ọ bụghị nke kọmputa.
Onwe m, mgbe m gụsịrị ozi na ibe Kickstarter, enwere m obi ụtọ ịhụ ihe emere n'ọrụ a. Site na narị ole na ole nkwado ugbua enweghị m obi abụọ ọ ga-eru ihe mgbaru ọsọ ya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ akụkụ nke Hiroshi na ihe ndị otu ahụ mebere, ịnyịnya ibu gị gafee ya KS peeji nke ma kwado oru ngo. I nwedịrị ike ị nweta ihe ọkpụkpụ nke isi gị site n'aka Hiroshi n'onwe ya.